MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Mohsen Mohammadi as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok in succession to H.E. Mr. Hossein Kamalian
by adminmofa on 04/02/2016 at 4:12 AM
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. Mohsen Mohammadi as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Islamic Republic of Iran to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Bangkok in succession to H.E. Mr. Hossein Kamalian.
Mr. Mohsen Mohammadi was born on 23rd October 1961 in Tehran, Iran. He receivedaBachelor’s Degree majoring in Political Relations from the Faculty of International Relations of the Foreign Ministry of the Islamic Republic of Iran in 1990. He can speak English, Turkish, Arabic, French and Russia.
Mr. Mohsen Mohammadi wasapolitical expert at the Directory for West Asia of the Ministry of Foreign Affairs of Iran from 1991 to 1993. He also served asapolitical expert at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Tashkand from 1993 to 1997. He also served asapolitical expert at the Directory for Common Wealth and Caucuses from 1997 to 1998 and as Deputy Director for Common Wealth and Caucuses from 1998 to 2001. He also served as Deputy Head of Mission of the Islamic Republic of Iran in Helsinki from 2001 to 2004. He then served asapolitical expert at West Europe Directory of the Ministry of Foreign Affairs of Iran from 2004 to 2006, and at the Directory of Disarmament and International Security from 2006 to 2008. He then served asalegal and international expert at the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Berlin from 2008 to 2011. He then served as an expert at the National Authority for Disarmament Conventions from 2011 to 2013. He has been appointed as Director of Second Directory for Common Wealth and Caucuses since 2013.
Dated: 4th February 2016.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအာဏာ ကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသည့် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် အီရန်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဟိုစိန် ကာမာလီယံ၏ နေရာတွင် မစ္စတာ မိုဆမ် မိုဟာမက်ဒီ အား ခန့်ထားရန် သဘောတူပြီး ဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ မိုဆမ်မိုဟာမက်ဒီကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အီရန်နိုင်ငံ၊ တီဟီရန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် အီရန်အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာဌာနမှ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး ဘာသာဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်၊ တူရကီ၊ အာရေဗျ၊ ပြင်သစ်နှင့် ရုရှား ဘာသာစကားများကို တတ်ကျွမ်းပါသည်။
မစ္စတာ မိုဆမ်မိုဟာမက်ဒီ သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ အီရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အနောက်အာရှဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၌ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ တက်ရှ်ခန်မြို့ရှိ အီရန် အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၌ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ ဓနသဟာယနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ဦးဆောင်အဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးတွင် နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ အဆိုပါရုံး၌ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ ဟယ်လ်စင်ကီး မြို့ရှိ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးတွင် သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အနောက်ဥရောပ ညွှန်ကြား ရေးမှူးရုံး၌ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၌ နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ ဘာလင်မြို့ရှိ အီရန်အစ္စလာမ်မစ်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၌ ဥပဒေနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးကွန်ဗင်းရှင်းများ ဆိုင်ရာ အီရန်အမျိုးသားအာဏာပိုင်အဖွဲ့တွင် ကျွမ်းကျင်သူ အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ဓနသဟာယ နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီဦးဆောင်အဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံး(၂)၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်လည်းကောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
မစ္စတာ မိုဆမ်မိုဟာမက်ဒီ သည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားသမီး (၂)ဦး ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်။